“ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းသမား” (၂) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » “ကျနော်ဓါတ်ဖမ်းသမား” (၂)	8
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on May 29, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary, Photography | 8 comments
1 မသပ်မယပ် ကွန်ချက်
မန္တလေးရောက်တော့ ကိုစိန်သော့ နဲ့ ဆက်သွယ်ပါတော့တယ်။
သူနဲ့တစ်ရက်ဆုံပြီး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ကြ စကားတွေပြောဖြစ်ကြပါတယ်။
သိပ်မကြာခင် ၂၀၁၁ ကုန်ခါနီးမှာ Mလုလင် က မန်းလေးကိုလာမယ်လို့ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
နောက်မန်းလေးမှာ ဓါတ်ဆရာ ရွှေမင်းသား လဲရှိနေပါတယ်။
သူတကယ်လာတဲ့ရက်မှာတော့ ကိုစိန်သော့ ရွှေမင်းသား ကျနော် နဲ့ Mလုလင် တို့ဆုံပြီး
တောင်သမန်းအင်းမှာ ကွန်ပစ်တာကို ရိုက်ကြပါတယ်။
အဲ့အချိန်က လှေသမားကို ငါးထောင်လောက်ပေးလိုက်ရင်
ကွန်ပစ်တဲ့ပုံ စိတ်တိုင်းကျ မရခြင်းကွန်ပစ်ပေးပါတယ်။
အခုတော့ စားဝတ်နေရေးကျပ်တည်း တာရယ် ကွန်သမားတွေကလဲ
အဲတော့မှာ ကျနော်ကို ကိုစိန်သော့က ဒီလိုပုံမျိုးရိုက်မယ်ဆိုရင်
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သာ စိတ်တိုင်းကျနေတာ သူတို့ပုံတွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် တခြားစီပါဘဲ။
နောက်ရက်မှာတော့ မင်းကွန်းကိုကျနော်ရယ် ကိုစိန်သော့ရယ် Mလုလင်
ဆင်တွေ့ လှည်းယာဉ်တွေ မြင်းတွေနဲ့ဝင်းခင်းပြီးအလှူလှည့်တာနဲ့ဆုံပါတော့တယ်။
အလှူလှည့်လာတာ မင်းကွန်းပုထိုးတော်ကြီး ရှေ့ရောက်ချိန်မှာ
ဆင် မြင်း လှည်းယာဉ်နဲ့မင်းကွန်းပိုထိုးတော်ကြီး ကြုံဘို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလေ။
ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရိုက်ထားတာတွေပြန်ပြကြတာပေါ့။
ကိုစိန်သော့က နီကွန် Mလုလင်က ကင်နွန် နှစ်ယောက်လုံး DSLR
ကျနော်က တော့ အပျော်တမ်းကင်မရာပေါက်စလေးနဲ့ပေါ့။
သူတို့ပုံတွေက တော့ တကယ့်အကောင်းစား။
ကျနော်ပုံတွေလဲပြရော ခြေမပါ ခေါင်းမပါ
နောက်ကလူက တစ်ခြမ်းပါ နေတော့ ဖြတ်လို့မရ။
လူနဲ့လှည်းယာဉ်အပြည့်ပါပေမယ့် ဘုရားက တစ်ဝက်တစ်ပိုင်း၊
ကိုယ်ဦးစားပေးပြချင်တဲ့ နေရာ သစ်ပင် အဆောက်အဦးတို့
နောက်တော့ Mလုလင်နဲ့ မန်းလေးတောင် ရန်ကင်းတောင် အတူသွားပြီးရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာတော့ မသိတာရှိရင် ကိုစိန်သော့မေး လုလင်မေးနဲ့
အဲဒီအချိန်မှာမှ ကိုစိန်သော့က ပုသိမ်ဘက်ကို ပြောင်းသွားပြန်ပါတယ်။
3လုလင်နဲ့ ဆုံတဲ့ မန်းလေးတောင်နံက်ခင်း
သူ ပုသိမ်ရှိနေတုန်းကျနော်ရယ်လုလင်ရယ်က ချောင်းသာကိုရောက်အောင်သွားလိုက်ကြပါသေးတယ်။
ဘာဘဲပြောပြော ချောင်းသာမှာတစ်ညအိပ်နေခဲ့ချိန်မှာ ညနေခင်းရောမနက်ပါ
“ကိုပေါက် ပုံကိုဒီလိုလေး ဖြတ်လိုက်ရင်
လှိုင်းတွေက ဒေါင်လိုက်ဖြစ်သွားပြီး ပိုပြီးပုံကိုအားကောင်းသွားစေတယ်”
အတူ ပြင်လေးထားတဲ့ ပုံလေးတစ်ပုံ ရောက်နေတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။
အဲတော့မှာ သူများတွေပြောနေတဲ့ ခရော့တယ်ဆိုတာ ကို သဘောပေါက်သွားပါတယ်။
အဲဒီသူကတော့ အကိုကြီး ရွှေသွေးဘောဂဗလပါဘဲ။
(ဓါတ်ပုံမှ မဟုတ်ဘူး လူ့လောကကြီးထဲက
လူအများဝင်ဖတ်လို့ရနေတဲ့ ကော်မင်းဘောက်စ်ကနေ မရေးဘဲ
နှစ်ယောက်ချင်းသာ သိတဲ့ချက်ဘောက်ကနေပြောရင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်
အခုအချိန်မှာတော့ သူများတင်ထားတဲ့ ပိုစ်တစ်ခုခုမှာစာလုံးပေါင်းမှားနေတာတို့
(အထူး ကျေးဇူးပါ အကိုရွှေသွေးရေ)
သူများတွေပါဖတ်နေတဲ့ ကွန်မင်းမှာဝင်ရေးရင် အကြောင်းမသိသူက
ဆရာလုပ်တယ်လို့ အထင်ခံရနိုင်တဲ့အပြင် ထောက်အပြခံရသူမှာလဲ
အနည်းနဲ့အများတော့ စိတ်ထဲမှာ အခံရ ခက်သွားနိုင်ပါတယ်။
အဓိက က မှားနေတာကို ကာယကံရှင် သိသွားဘို့ ပါဘဲ။
Alinsett @ Maung Thura says: မန်းလေးတောင် နံနက်ခင်းနဲ့
.ချောင်းသာ ညနေ ပုံလေးတွေ လှလိုက်တာ..
အိပ်မက်ထဲမှာ မြင်နေရသလိုလေး… ဒါနဲ့ …ပိုစ့်ခေါင်းစဉ်က တမင် ဖြုတ်ထားတာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ်။
.လောလောဆယ် ထည့်ပေးထားမယ်နော်.. ။
.ခေါင်းစဉ် မပါတဲ့ပိုစ့်က ကလစ်ရခက် / ဝင်ရခက် တတ်လို့….
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ကျေးဇူးပါအလင်းဆက်ရေ
စာကိုယ် ကို အရင်ထည့်လိုက်မိလို့ဖြစ်မယ်
မြစပဲရိုး says: အပေါ်ဆုံး နှစ်ပုံ က မြင်ဖူးတယ်။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပုံ ကို ကိုယ်တိုင် ရိုက်လိုက်တာလား။ အားကျလိုက်တာ ကပေါက်ကြီး ရာ။
. ချောင်းသာ ရဲ့ အလှ က ပိုပေမဲ့ သစ်ပင်တွေ တောတွေ ပါတဲ့ မန်းလေးတောင်နံက်ခင်း ကို အကြိုက်ပေး လိုက်ပါတယ်။ :-))
3-3-2012 အမေစု မန္တလေးကို လာတဲ့ အချိန်က ကိုယ်တိုင်ရိုက်လိုက်တဲ့ ပုံလေးပါ။
မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီနေ့က မယ်ပု တို့ ကအမေစု ကိုလာကြိုရင်းတံခွန်တိုင်အ၀ိုင်းပါတ်မှာ
ကျနော်က ဗာကင် စည်သွတ်စက်ရုံနားမှာ အဲလိုကြိုကြတာ
ဒီပုံလေး အပါအ၀င် ဖေစ်ဘုတ်မှာတင်လိုက်တဲ့ ဓါတ်ပုံ (၁၀)ပုံ ကို DVB သတင်းဌာန က တစ်နေကုန် လွှင့်ပေးသွားပါတယ်။
မန်းလေးတောင်ပုံကတော့ ကျနော် နှစ်သက်တဲ့ပုံလေးထဲက တစ်ပုံပါဘဲ။
တာချိလိတ်ပါတ်ဝန်းကျင်အလှကို ကျနော့် ဂရု “လှပသောအလင်းပုံရိပ် “မှာ တင်ပေးပါအုံးနော်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မျှစ်ကြော်လည်း ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တအားညံ့တာ။ မလိုတာ ဖြတ်ထုတ် ဆိုတဲ့မူကို စဉ်းစားသွားပါတယ် လေးပေါက်ရေ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဓါတ်ပုံပညာမှာ မဖြတ်တတ် ( မခရော့ )တတ်ရင် ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကို မပီပြင်နိုင်သလို
လူလောကရဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကလဲ ဒီအတိုင်းပါ ဘဲ မပြုံးရေ